Izindlela ezi-7 i-AI evuselela Ukumaketha Kwe-imeyili | Martech Zone
Izindlela ezi-7 i-AI evuselela Ukumaketha Kwe-imeyili
ULwesine, May 28, 2020 ULwesine, May 28, 2020 Douglas Karr
Esontweni noma edlule, ngabelane kanjani ISalesforce Einstein ibiguqula ngendlela ephawulekayo uhambo lwamakhasimende, ibikezela futhi inikeze ukuxhumana okwenzelwe wena okudala umthelela futhi kunciphise ukuhwebelana kwamakhasimende we-Salesforce ne-Marketing Cloud.
Uma ungabhekanga ifayili lakho le- ukugcinwa kohlu lwababhalisile Muva nje, ungamangala ukuthi bangaki ababhalisile abaqhuqha ngokuqhubekayo. Kunezinketho eziningi laphaya zemikhiqizo emihle, ngakho-ke abathengi ababambeleli ku-crappy i-batch nokuqhuma izincwadi zezindaba ze-imeyili. Balindele ukuthi umlayezo ngamunye kubhokisi labo lokungenayo ufaneleke, ufike ngesikhathi, futhi ube yigugu… noma kungenjalo bayahamba.
Ukuze usebenze, ufike ngesikhathi, futhi ubaluleke… kufanele uhlukanise, uhlunge, wenze ngezifiso, futhi ukwandise ukulethwa kwakho kwe-imeyili. Lokho akunakwenzeka ngaphandle kwamathuluzi afanele… kepha ukubonga ngobuhlakani kuyasheshisa ikhono labakhangisi lokuthuthukisa imikhankaso yokuphila, yokuphefumula eqhubeka nokuzikhulisa ngokufunda ngomshini.
Lokhu kuzokwenza abathengisi bakwazi ukuthumela imilayezo ngejubane ababhalisile abanethezekile ngalo, nokuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho futhi okuhehayo.
I-AI Revolution Ekumaketheni Kwe-imeyili
Izinkampani ezingama-30% emhlabeni wonke zizobe zisebenzisa i-AI okungenani kweyodwa yezinqubo zokuthengisa ngo-2020. Ngo-2035, i-AI kulindeleke ukuthi ishayele imali eyizigidigidi eziyi-14 zamaRandi yemali eyengeziwe kanye nokwenyuka kwenzuzo okungama-38%!
Eqinisweni, ama-61% wabathengisi be-imeyili bathi i-AI iyisici esibucayi kakhulu secebo labo ledatha ezayo. Nazi izindlela ezi-7 zokuthi ubuhlakani bokufakelwa bunomthelela ekuthengisweni kwe-imeyili kube ngcono.
Ukuhlukaniswa nokwahlukaniswa kwamuntu - Ukuthola amaphuzu okuqagela nokukhethwa kwezithameli kusebenzisa ama-algorithms ukucabanga ngokuziphatha kwababhalisile futhi kulungiswe kahle okuqukethwe okuzoboniswa kubo ngesikhathi sangempela.
Ukusebenziseka Komugqa Wesihloko - I-AI ingenza lula ukwakhiwa kwemigqa yezihloko okungenzeka ukuthi ihlangane nomfundi, ibadonsa ukuvula i-imeyili. Lokhu kususa ukungaqiniseki kwesilingo nephutha uma kukhulunywa ngokwakhiwa komugqa wezihloko ohilelekile.
Ukubuyisela i-imeyili kabusha - Ngenkathi amanye amakhasimende engaphendula nge-imeyili yakho yokulahla ethunyelwe ngokushesha ngemuva kokushiya, amanye kungenzeka angakulungeli ukuthenga isonto lonke. I-AI yehlukanisa phakathi kwala makhasimende futhi ikusize ukuthi uthumele ama-imeyili akho abheka kabusha ngesikhathi esifanele, ngokwehlisa kakhulu izinga lokushiya inqola
Ukusebenziswa kokusebenza kwesikhathi okuzenzakalelayo (STO) - Ngosizo lwe-AI, imikhiqizo ekugcineni ingafeza ubuthathu bokumaketha - ukuletha umyalezo ofanele ngesikhathi esifanele kumuntu ofanele. Ngabe ama-imeyili amaningi wokuphromotha awacasuli? I-AI isiza ukulinganisa isikhathi sokuthumela ngokuhlaziya imisebenzi yababhalisile, ekhombisa ukuthanda kwabo isikhathi.
Ukuzenzekelayo kwe-AI - I-AI akuyona into ezenzakalelayo nje. Kuyisinyathelo phambili ukusiza ekuthumeleni ama-imeyili azenzakalelayo afanelekile ngokubheka ukuxhumana okwedlule kobhalisile nomkhiqizo nokuthengiwe.
Ukusetshenziswa Kweziteshi Ezingcono Futhi Ezilula - Ukuhlaziya imikhuba yekhasimende, okuncamelayo, nokuziphatha kwangaphambilini nokubikezelwe, i-AI isiza ukunquma ukuthi ngabe izophinda ihlangane kangcono nge-imeyili, isexwayiso, noma esinye isiteshi. Ngemuva kwalokho ithumela umyalezo esiteshini esifanele.
Ukuhlolwa okuzenzakalelayo - Ukuhlolwa kwe-A / B, phambilini inqubo ebukeke ngakubili manje isidlulele kumodeli ye-omnichannel hyper-targeting. Ungahlola okuguqukayo okuningana kuzimvume ezahlukahlukene nezinhlanganisela. Amasistimu amaningi athumela isampuli ngaphandle, afinyelele kumphumela ovumelekile ngokwezibalo, bese ethumela ababhalisile abasele ikhophi elenziwe kahle.
Nayi i-infographic ephelele enezincazelo ezinemininingwane ngendlela ngayinye lapho i-AI iguqula ukumaketha kwe-imeyili.
Tags: aiokuzenzakalelayoukusebenza okuzenzakalelayo kwesikhathi sokuthumelaUkusebenza kwesiteshiezentengiselwano ifu einsteinukwenziwa kube lula komuntuukuzenzelaukwahlukanisa
Ungayithuthukisa Kanjani Amanani Wokuguqulwa Kwamaselula Ngama-Wallets Wedijithali
Amatemu Womklami: Amafonti, Amafayela, Amagama Okuchazwa kanye Nezincazelo Zesakhiwo